Linux Mint 15 "Olivia" Xfce azo alaina | Avy amin'ny Linux
fotsiny ambara ny fisian'ny Linux Mint Olivia ao amin'ny kinovanao Xfce, izay miaraka amin'ny kinova 4.10 amin'ity Desktop Environment ary fanovana kely ity.
Ho an'ireo vao manomboka, ny menio misy anao Xfce dia ho Wisker ¿Toa mahazatra?
Ho an'ny ambiny, ny fanovana sy fanatsarana mitovy noho ny sisa amin'ny edisiona.
Fampahalalana bebe kokoa sy rohy fampidinana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Linux Mint 15 "Olivia" Xfce azo alaina
Ny menio Whisker dia tsy ratsy, fa tsy misy toa an'io klasika io, sa tsy izany?
Tokony hiala tao amin'ny menio Xfce mahazatra izy ireo.
Eny ary, tsy tiako ny menan'ny Wisker, aleoko ilay mahazatra avy any Xfce.
* Lohahevitry ny lohahevitra: ny mpampiasa ny kinova Opera vaovao dia "OPR" (hoy aho noho ny plugin plugin)
Misaotra amin'ny tendrony 😀
Mahita sary masina fanampiny 3 ao amin'io WhiskerMenu io aho. Ilaina ny manaporofo izay napetrak'i Mint taminy. Fanatsarana mety tsara 🙂
Geekzombie dia hoy izy:
Heveriko fa kisary xfce tontonana no tianao holazaina.
Mamaly an'i Geekzombie
Marina ny anao. Very tamin'ny sary aho satria napetrako foana ny menio nataoko. Tsy tiako fa mifanohitra amin'ny hery misintona izany 😉
Etsy andaniny @elav dia miadana be ny bilaogy 🙁
Misy ny fanovana (indray mandeha indray) ao amin'ny DNS an'nyLLLL .. Mba mahareta re.
Toa tsara be .. na dia tsy hampiasa izany amin'ny solosaina xD aza aho
Flex dia hoy izy:
idem. Tena tsara fa nitranga izany. Mahantra izay mila mampiasa azy
Mamaly amin'ny flex
eulalio dia hoy izy:
Tsara ity distro ity, izay tianao ihany no azonao apetraka, tsy voatery amin'ny alàlan'ny didim-panjakana izay tadiavin'ny distro ary avy eo izay tianao, sahala amin'i Debian.
Mamaly an'i eulalio
Wisker Noheveriko fa milaza ianao fa mahazatra an'i Wesker, eny ilay toetra avy amin'ny lalao RE lolol.
Izaho manokana dia tiako ny menu Wisker sy ny menio MintMenu, mora ampiasaina izy ireo ary voadidy tsara. Tsy mandany fotoana mitady programa ianao.
Manamora ny fiainana ireo vao tonga any Windows ihany koa izy ireo.
Aza adino fa amin'ny taona 2014 dia tsy hanohana ny Windows XP i Microsoft.
Betsaka ny olona efa zatra Windows XP, mino aho fa afaka manome fahafaham-po sy manolo ny Windows XP ny XCFE sy ny tontolony.
hanohy hampiasa xp xd ny olona ... tsy misy fanohanana haha ​​raha mbola tsy manavao ny xd
Heveriko fa tsy miraharaha ny fanampiana izy ireo ... tsy miraharaha aho fa te hampatahotra anao ry zareo. Ampiasain'izy ireo ny FUD ho anao manavao ...
Marina izany, raha mbola afaka miditra ao amin'ilay boky sy mampiasa teny izy ireo, dia tsy hampaninona azy ireo fa mijanona tsy manana fanohanana intsony ny wxp.
Eny, raha ny MS Office no "vatofantsika" mitazona azy ireo ao anatin'io OS io, heveriko fa tsy fialan-tsiny izany. Nametraka ny kinova 2007 sy 2010 tamin'ny Arch aho, tamin'ny fampiasana CrossOver ary miasa tsara izy ireo.
Bah, raha mampiasa LibreOffice sy boky bebe kokoa momba ny Debian aho noho ny fitoniana omeny ahy. Ary koa, efa nosoloiko ny Windows XP ny Windows Vista SP2, ka "tsy misy tokony hatahorana" (ho an'ny asa mitaky ahy hampiasa rindrambaiko manana, mampiasa Windows aho; ary ny sisa, Debian).
ny ms excel dia mianjera isaky ny roa isaky ny crossover na divay, somary mahantra ny fampisehoana, saingy hey afaka mampiasa mailaka birao foana ianao amin'ny zavatra tsotra.
Pandev92 Manaiky anao aho.
Nefa tadidio ao amin'ny WINDOWS XP fa tsy afaka mihazakazaka ny lalao video sy ny fitaovana enti-miasa vaovao intsony ianao satria tsy manohana XP i Microsoft.
Betsaka ny olona efa zatra XP fa miasa miaraka amin'ny rindrambaiko izay misy fanavaozana tsy tapaka.
Etsy ankilany, firenena sasany, vondrom-piarahamonina any Eropa sy ny tanàna no nanome fanampiana GNU / LINUX, toa an'i Munich, South Tyrol, sns.
Raha GNU / Linux no ampiasaina amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana (farafaharatsiny amin'ny birao birao) dia hamonjy maitso an-tapitrisany isan-taona.
Soa ihany, ao amin'ny institiota misy ahy, izy ireo dia hampianatra anay hampiasa CentOS ho an'ny tahiry, fampiantranoana tranonkala ary zavatra maro mifandraika amin'ny fitantanana tranokala (na dia mipetraka amin'ny firenena iray izay namidy am-paosy an'i Microsoft aza aho, ekena ny fandraisana andraikitra).
Ny ankamaroan'ny olona dia manana kinova xp. Tsy raharahain'izy ireo ny tsy fananany fanampiana.
Tiako izany, niandry ny hivoahan'io tsiro io aho ary heveriko fa tena tsara momba ny menio whisker, heveriko fa raha tsy tianao izany dia hanana safidy foana ianao hiverina any amin'ny kilasika.
Mandeha tsara amin'ny ondrilahy 500 ve izy io?
ao amin'ny pejy Linux Mint fahazoan-dàlana farafaharatsiny 384 MB an'ny Ram, na dia ho an'ny fampisehoana tsara indrindra aza dia manome 1 GB izy ireo.
Marina. Ny hoe miaraka amina RAM 384 dia mandeha izy, dia diso, satria na dia 512MB aza dia mandeha tsara. Manazava aho fa tsy hoe tsy mifanaraka amin'ireo vola ireo ny rafitra, fa mihatra izay nolazain'i marianogaudix momba ny Win XP.
Ampiasao tsara kokoa ny Debian + LXDE, OpenBox na X11 fotsiny. Voavaha ny olana.
Ao amin'ny solosainan'ny namanao manana 512 mb mihazakazaka azy ary haingam-pandeha ao amin'ny kinova 14, nametaka swap 2 GB aho (mazava ho azy fa zavatra diso toerana be io) fa satria tsy mamono azy io ary ampiasain'ny zanany hilalao. lalao an-tserasera sy mijery horonantsary amin'ny YouTube tontolo andro no mahatonga azy hitondra tsara.
Ary lazaiko aminao ilay zavatra nolazaiko azy ihany, mankanesa any amin'ny manager software ary misintoma Midori (na dia Firefox tsara indrindra aza izany), nanova ny Banshee ho an'ny Audacious aho ary nanao mpandefa baiko xkill tao anaty tontonana (ao amin'ny tranga). Fa eny, amin'ny 512 mb, mandeha tsara ny fahitana azy amin'ny solosain'ilay namako.
Vita tsara. Ary koa, mampiasa VLC aho fa tsy Totem hijerena ny sarimihetsika, ary Audacious ho an'ny mozika.
Na dia tsy maintsy mampitandrina anao aza aho fa ny Slackware sy Debian no tsara indrindra rehefa mandeha amin'ny milina efa lany andro.
Raha ny amiko dia mampiasa VLC amin'ny zava-drehetra aho (na dia YouTube)
Ao amin'ny solosainako, izay mampiasa Linux Mint Xfce ihany koa, manova an'i Thunar ho Caja (tena tiako ny fiaviana sy ny emblemam-pifidianana ...). Thunar dia mampiasa azy fotsiny ho superuser (mba tsy hahatsapa ho sakana amin'ny masiniko).
Audio, Clementine no ampiasaiko ho tranombokim-peo sy Audacious hanokafana rakitra tsotra.
Amin'ny lohahevitra video hafa, indraindray Totem, VLC ary Media Player (samy manana ny endritsoratra ho an'ny dikanteny ny tsirairay avy ka tsy mankaleo ahy manokana.
Kairo Dock ary tsy misy zavatra hafa. MintMenu no ampiasaiko: '(
Manontany tena aho hoe inona no vaovao ato amin'ity kinova ity izay tsy manana xubuntu na distro hafa miaraka amin'ny tontolo XFCE
araka ny lazain'ny sary masina maitso etsy ambany ary mihinana RAM bebe kokoa izy.
sary masina maintso
Mint XFCE sy LXDE dia mavesatra kokoa Xubuntu sy Lubuntu (lazaiko avy amin'ny zavatra niainako manokana izany). Ny tena fandraisana anjaran'ny Mint dia ao amin'ny kinnona kinova.
+1, Linux Mint dia tsara ary izy rehetra nefa fenoina fampiharana (= mavesatra) Gnome toa an'i Banshee ohatra.
Aleo ampiasaina ny mpametraka modely lahatsoratra, apetaho ny GUI fototra sy voila: Linux Mint XFCE manidina toy ny voromailala.
Mint no rafitra nanombohako nampiasa Linux (andiany 12 miaraka amin'ny Gnome, DE mahatsiravina fa avy eo zatra izany ianao), avy eo fantatro ny "hazavana" bebe kokoa ny tontolo iainana ary hoy i Mint "mifankahita any aoriana ary raha izaho efa nahita anao tsia tadidiko ".
Ny kinova voalohany an'ny KDE dia ratsy tarehy noho ny GNOME mihitsy. Saingy izao, tsara kokoa ny KDE ary ny GNOME dia midina miaraka amin'ny akorany. Ankehitriny, nihatsara ny LXDE sy XFCE, ary aleoko ny distro toa an'i Debian sy Slackware izay mahalala manararaotra azy toy ny distro hafa.
Heveriko fa tsy misy mint lxde
Nanandrana linux mint indray mandeha aho ary tsy nampiasa azy intsony, tsy dia tiako loatra.! _-
Izany no ilazako azy nefa tsy te-ho fanboy aho, fa raha ny filanao pc no manidina dia fidio ny Archlinux miaraka amin'ny boaty misokatra, amin'ny fampiasana ireo hazavana Apps izay tsy tokony hiasa ratsy noho io antony io dia manazava aho. Na raha tsy te-hihodina ianao dia tokony miaraka amin'ny boaty misokatra na ho an'ny crunchbang mora kokoa aza. Milaza izany aho amin'ny alàlan'ny OS fanabeazana fototra isan'andro
Hisafidy telefaona finday izahay .. (MAXIMUM TROLLING)
Toa tsy avelako na i Xfce intsony ny manokatra ny lozisialy fampiharana avy amin'ny birao
tsara fa niandry anao aho! raha ny hevitro ny fanontana xfce an'ny linux mint no tsara indrindra! mazava ho azy fa ny an'ny kde dia tsara kokoa noho ny kubuntu 🙂
Io sy ny menio eo amin'ny birao dia raikitra avy ao amin'ny foibe fikirakirana Xfce.
Nanandrana aho ary nahatonga ahy ho nostalgia noho ny gnome 2 xD
Marina fa zavatra mitovy amiko no mitranga. Tsy afaka niala tamin'ny hevitra Gnome 2 mihitsy aho, Gnome 2 an-tsekoly taloha.
Mint no ampiasaiko satria amin'ny toerana misy anao dia misy zavatra maro hanomanana programa amin'ny DVD-nao, zavatra tiako, satria tsy manana Internet aho indraindray.
Efa nanao veloma ny GNOME 3.8 / 3.9, sns. Tsy mitovy intsony ny tetikasa, ho ahy ity mitam-piadiana iray ity. Gnome 2 no tsara indrindra tamin'izany fotoana izany tsy isalasalana fa tsy hohadinoiko mihitsy.
jory666666 dia hoy izy:
Salama, vaovao aho amin'ity forum ity satria mpidoroka marianogaudix na manavao ianao na maty windows xp dia tsy hanana fanohanana aorian'ny 2013 ka nametraka linux mint aho avelao aho hitantara aminao ny zavatra niainako satria ny antony nanovana ny rafitra iasako ho an'ny tanàna filoham-pirenen'i Mexico sy Czech Ny masinin'izy ireo, izay hafahafa, fa mbola mampiasa windows xp ho an'ny birao PC 111 1ghz mora vidy 2003 foana matetika dia voan'ny virus izy ireo dia nividy milina vaovao ho an'ny famantarana ny governemanta saingy mitovy ihany ny nijanonany xp Te-hametraka an'ity rafitra ity aho medikaly manana tontolo iainana sariaka izao, dia mila mampianatra azy ireo hampiasa izany fotsiny izy ireo
Valio ny jory666666
Juanlu dia hoy izy:
(Miala tsiny amin'ny tsy fisian'ny lantom-peo) Misedra Mint Xfce aho ary tena tsara izany, saingy liana amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny MATE sy kanelina aho. Efa nieritreritra ny hanome hevitra momba azy ireo ve ianao androany?
Miarahaba anao amin'ny blaogy ary mampahery anao amin'ny tetikasa vaovao!
Valiny tamin'i Juanlu
Ampidiro ary alamino ny RSSOwl ao amin'ny Debian 6